साउदीमा शनिबार १९ सय कोरोना मुक्त, नयाँ संक्रमित कहाँ कति?(सूचीसहित) -
साउदीमा शनिबार १९ सय कोरोना मुक्त, नयाँ संक्रमित कहाँ कति?(सूचीसहित)
कुल कोरोना निको हुनेको संख्या दुई लाख ३७ हजार नाघ्यो
१७ श्रावण २०७७, शनिबार २१:३० । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा कोरोना नयाँ संक्रमितसँगै मृत्यु हुनेको संख्या घट्दै गएको छ । यसै क्रममा शनिबार कोरोना भाइरसका उपचार गरिरहेका २१ जनाको मृत्यु भएका छन् ।
उक्त संख्यामा मृत्यु भएको यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार हालसम्म साउदीमा कोरोना भाइरसबाट २ हजार ८८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी प्रवक्ता डा.अब्दुलीका अनुसार साउदीमा शनिबारसम्म कुल दुई लाख ७७ हजार ४७८ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । तीमध्ये आज १ हजार ५७३ जना नयाँ संक्रमित थपिएको उनले बताए ।
यहाँका विभिन्न अस्पतालहरुमा ३७ हजार ४३ जना कोरोना भाइरसको संक्रमितहरु उपचाररत रहेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनकाअनुसार तीमध्ये २ हजार १६ जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेका छन् ।
त्यस्तै साउदीमा शनिबार १ हजार ८९० जना कोरोना भाइरसको उपचारपछि घर फर्किएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म दुई लाख ३७ हजार ५४८ जना कोरोना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
आजको अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितभन्दा कोरोना उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या ३१७ जना बढी छन् । यहाँ कोरोना गत मार्च २ तारीखबाट सुरु भएको थियो ।
त्यसैगरी आज साउदीको राजधानी रियादमा सबैभन्दा धेरै १०२ जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.अब्दुलीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार मक्का ८९, दमाम ७२, अल हफुफ ६१, मदिना ५५, खमिस मुसायत ५२, हाइल ५१, नजरान ४१, बुरैद ३८, जिजान ३२, जेद्दा ३१, अल बुकेरिया २९, तैफ २९, अर रास २६, ओयोन अल जावा २५, उनैजा २५, बरेक २५, रेजल अल्मा २५, अल मजारदाह २४, वादी अल दावासीर २४, यान्बु २३, आभा २३, अल हरजाह २१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
यहाँका अन्य शहरहरुमा कोरोना नयाँ संक्रमित बीसभन्दा तलको संख्यामा रहेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
•साउदी कोरोना भाइरस निको हुनेको संख्या तीन गुणा बढ्यो
लुकासेन्को ८० प्रतिशत मतका विजयी, विपक्षीद्वारा विरोध प्रदर्शन
साउदीमा दैनिक कोरोना संक्रमितभन्दा, निको हुनेको संख्या बढ्यो
लेबनानी विष्फोट शीघ्र तथा प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्छ : म्याक्रो